10ka Mawduucyada WordPress ee ugu Wacan ee Bilaashka ah 2021 | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/10ka Mawduucyada WordPress ee ugu Wacan ee Bilaash ah ee 2021
10ka Mawduucyada WordPress ee ugu Wacan ee Bilaash ah ee 2021
Mawduucyada jawaabaha leh ee WordPress waa mowduucyo la qabsada qaabeynta iyadoo loo eegayo qeexida aaladda isticmaale ama browserka. Tusaale ahaan, ka beddelashada halbeegyada safafka badan sida muraayadda u koraysa cabbirkeeda. Maqaalkani waxa uu sharxayaa faa'iidooyinka isticmaalka mawduucyo ka jawaabaya oo dib u eegaya mawduucyada jawaabta bilaashka ah ee ugu sarreeya ee WordPress ee 2021.
Faa'iidooyinka Mawduucyada WordPress ee Jawaabta leh
Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah oo loo adeegsado isticmaalka mawduucyada jawaabaha leh ee WordPress, oo ka baxsan kaliya u hoggaansanaanta naqshadeynta shabakada hababka ugu fiican.
Naqshado jawaab celin ah ayaa caadi ahaan u horseeda khibrad isticmaale oo ka wanaagsan tan iyo waxa ku jira ayaa loo habeeyey si ay ugu habboonaato sida isticmaaluhu u soo booqanayo goobtaada. Mawduucyada ka jawaabaya waxay dib u habayn karaan menu-yada navigation, badhamada cabbirka, oo u adeegaan dalagyada sawirada kala duwan si loo yareeyo dadaalka looga baahan yahay isticmaalayaasha si ay ula falgalaan goobtaada.
Sidoo kale, mawduucyada ka jawaabaya waxay bedeli karaan nuxurka la bixiyay, iyaga oo u adeegaya sawiro ama muuqaal hoose. Tani waxay yaraynaysaa shuruudaha bandwidth ee boggaga qadarka ugu badan ee faa'iidada leh, hoos u dhigista wakhtiyada culeyska. Tusaale ahaan, ma jirto sabab loo lumiyo xadhkaha xadhkaha goosashada ee u adeegaya muuqaal sare oo shaashad yar ah tan iyo markii tafaasiisha la lumiyay ilaa isticmaaluhu soo dhaweeyo mooyee. Waqtiyada xajinta degdega ah waxay u horseedaan khibrad isticmaale oo wanaagsan iyo isticmaalka goobta oo kordha.
Korodhka Gaadiidka Mobilka
Qayb muhiim ah oo ka mid ah taraafikada shabakada waxay ka timaadaa aaladaha mobilada ee u baahan qaabayn aad uga duwan kan laptops ama desktop-yada. Mawduucyada ka jawaabaya waxay hubiyaan in boggagaagu ay la jaan qaadayaan oo loo hagaajiyay booqdayaasha moobaylka. Marka goobuhu aad ugu raaxaystaan ​​oo laga isticmaali karo aaladaha moobaylka, gaadiidkaagu si dabiici ah ayuu u kordhaa ka tegistaaduna way yaraanaysaa.
Mawduucyada WordPress ee ugu Wacan ee Bilaashka ah
Waxaa jira mawduucyo badan oo WordPress ah oo aad u fiican oo aad ka dooran karto, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay yihiin kuwo jawaab celin ah oo bilaash ah. Hoos waxaa ku yaal dhawr tusaale oo mudan in la tixgeliyo.
Astra waa mawduuc dabacsan oo loo isticmaali karo goobo badan oo kala duwan. Waxay la socotaa in ka badan 100 qaab oo hore loo sameeyay oo loogu talagalay qof walba laga bilaabo dukaamada xayawaanka ilaa vloggers. Kuwan waxaa lagu dhisay bogag dhisayaasha WordPress sida Brizy, Elementor, iyo Beaver Builder. Dhammaan qaab-qaabadu waa jawaabo waxaana loo qaabeeyey inay si cillad la'aan ah ugu shaqeeyaan qalab kasta.
Astra sidoo kale waxay leedahay sifooyin kale oo badan kuwaas oo ku habboon goobaha jawaab celinta. Kuwaas waxaa ka mid ah madax dhejisyo dhejis ah, raritaan bogag aan xadidneyn, dareere iyo qaabayn dhismeed, iyo wadarta faylka mawduuca oo ka yar 50kb.
Wanaagsan waa mowduuca ugu yar ee loogu talagalay faylalka hal-abuurka leh, baloogyada, iyo majaladaha. Waxaa ku jira sifooyin loogu talagalay habaynta summada, kobcinta SEO, menu-yada aan xadidnayn, taageerada meelaynta, iyo tayaynta waxqabadka. Waxaad ku kordhin kartaa fiilo foomamka ah. Mawduucani waxa kale oo uu bixiyaa cusboonaysiin joogto ah si loo hubiyo in boggaagu la mid yahay nooca ugu dambeeyay ee WordPress.
Blocksy waa mawduuc WordPress ah oo fudud oo lagu dhisay tignoolajiyada ugu dambeeyay. Waxaa la dhisay iyadoo maskaxda lagu hayo tifaftiraha Gutenberg waxayna leedahay doorashooyin badan oo ka dhigaya mid la fidin karo oo la beddeli karo. Waxaad si fudud u samayn kartaa nooc kasta oo degel ah, sida wakaalada ganacsiga, dukaan, shirkad, waxbarasho, makhaayad, blog, portfolio, bogga degitaanka, iyo wixii la mid ah.
Waxay u shaqeysaa sidii soo jiidasho leh kuwa caanka ah ee dhisayaasha bogga WordPress, oo ay ku jiraan Elementor, Beaver Builder, iyo Brizy. Maadaama ay tahay mid wax ka qabata oo la qabsanaysa, tarjumaad diyaar ah, SEO la hagaajiyay, oo ay leedahay WooCommerce ku dhex-dhismay, waxaad la kulmi doontaa dhismo fudud iyo xitaa korodhka beddelka.
4. Wakaalada Lite
Agency Lite waa mawduuc ujeedo badan oo loogu talagalay in lagu isticmaalo faylalka, baloogga, iyo goobaha ganacsiga. Waxaa ka mid ah qaybaha FAQs, blogs, sliders, nagu saabsan, sifooyinka alaabta, kooxaha, iyo sharraxaadaha adeegga. Agency Lite sidoo kale waxay bixisaa degenaansho iyo taageero eCommerce iyo sidoo kale muuqaal horudhac toos ah.
Hel Agency Lite
Ember waa mawduuc hal bog ah oo loogu talagalay kuwa bilaabay, kuwa iskood u shaqeysta, wakaaladaha hal abuurka leh, iyo ganacsiyada yaryar. Waxay ku daraa sifooyinka naqshadaynta parallax ee madaxa si loo sameeyo bogag gaar ahaan indho-qabad. Naqshadeynta Parallax waxay abuurtaa dareenka qoto dheer ee garashada iyo dhaqdhaqaaqa iyadoo la dhimayo asalka iyo walxaha hore. Ember waxa kale oo ku jira sifooyin waxka beddelka, dib-u-eegis-waqtiga-dhabta ah, iyo beddelka koodka eber.
Sydney waa mawduuc loogu talagalay boggaga ganacsiga ama kuwa iskood u shaqeysta. Waxay ku salaysan tahay Elementor, qalab dhisme bogag WordPress ah oo bilaash ah. Sydney waxaa ku jira astaamo kala duwan oo loogu talagalay habeynta, oo ay ku jiraan gelitaanka Fonts Google, kontoroolka qaabeynta, raritaanka astaanta, kontoroolka midabka buuxa, sawirada madaxa, slide-shaash buuxa, iyo hagitaan dhegdheg leh. Waxay adeegsataa asalka parallax waxayna tarjumaad diyaar u tahay isticmaalayaasha caalamiga ah.
Zakra waa mawduuc ujeedo badan leh oo aad u isticmaali karto blogyada, eCommerce, ama boggaga ganacsiga. Waxa ku jira sifooyin loogu talagalay boggaga kooxda, sumadaha macmiilka, markhaatiyaasha, iyo madax ballac buuxa oo leh meel bannaan oo loogu yeedho ficil. Waxa ay taageertaa isticmaalka tifaftiraha WordPress ee Gutenberg iyo bogga Elementor plugin.
Zakra sidoo kale waa lagu bedeli karaa midabka, qaabka, qoraalka, iyo qaabka madaxa. Waxaad ku bilaabi kartaa in ka badan 30 qaabaynta demo oo aad hagaajiso qaabaynta si aad u daboosho baahiyahaaga.
Phlox waa mawduuc dabacsan oo aad la qabsan karto ku dhawaad ​​ujeeddooyin kasta oo goob kasta. Waxa ku jira bandhigyo horudhac ah oo kala duwan oo aad la qabsan karto baahiyahaaga gaarka ah iyo in ka badan 40 qaab oo diyaar u ah in la isticmaalo. Phlox waxa kale oo ka mid ah in ka badan 30 Cunsuri, oo ay ku jiraan sifada goobaha sawirada, qaybaha la dumin karo, tabs, foomamka, sawirada sawirida, iyo wakhtiyada.
Waxaad mawduucan ku dari kartaa labadaba Google Fonts iyo WooCommerce. Haddii aadan rabin inaad ka soo bilowdo qaab-dhismeedka, waxaad isticmaali kartaa qalabka bogga dhisaha ee ku jira si aad u jiiddo oo aad u daadiso walxaha gaarka ah.
Neve waa mawduuc ganacsi oo laga dhisay Elementor. Waxay la socotaa in ka badan 80 qaab-muuqaal oo leh qaab la habeyn karo, madax, iyo cag. Neve waxaa ka mid ah sifooyinka miisaska qiimaha, baloogyada dulsaarka, rarista caajiska ah, iyo asalka parallax.
Flash waa mawduuc ujeedo badan leh oo ku salaysan SiteOrigin bog dhisaha. Waxa ku jira sifada dhismaha jiidid iyo tuurista, dhisidda widget-ka caadiga ah, midabaynta iyo habaynta qoraalka, sawir-qaadayaasha, iyo is-dhexgalka warbaahinta bulshada. Waxaad ku fidin kartaa Flash adoo wata agabka Flash Toolkit iyo 11 widgets oo khaas ah. Waxay la midaysaa WordPress Live Customizer iyo WooCommerce.
Laga soo bilaabo 2011, isticmaalka internetka ee mobilada ayaa arkay 504% kobac. Taasi waxay ka dhigan tahay in aad iyo aad u badan oo taraafikada goobtaada ka imaanaya aaladaha mobilada, halkii ay ka ahaan lahaayeen laptops, PCs, iyo tablets. Si aad isticmaalayaasha moobaylku awood ugu yeeshaan inay si sahal ah u baadho goobtaada, waxaad u baahan tahay inaad naqshadayso adigoo maskaxda ku haya. Waxaad si fudud taas ku samayn kartaa mawduucyo WordPress ah oo bilaash ah kuwaas oo mar hore loogu talagalay isticmaalka ka jawaab celinta.
Buuxda, Hagaha Omnichannel ee Suuqgeynta Cannabis ee 2020
15 Kick-Ass Haweenka WordPress si ay ula socdaan Twitter